China Fividianana mofomamy vaovao fametahana lovia misy vidiny Fividianana sy mpanamboatra | Bakeware
Muffin / mofomamy mofomamy
Troli matevina vy
fivarotana mofo mofo mofo / lasary mofo
Famonon-mofo mofo / bobongolo mofo
Sandwich Aluminum amin'ny mofo vita amin'ny mofo
Fametaka mofomamy vaovao vaovao manendasa lovia misy vidiny lehibe
Mofomamy sy vongy mofomamy
Mpifankatia, mitondra fiara
Mofomamy mofomamy sy karazan-tsakafo:
Fandroana mofo miaraka amin'ny sarony
0.6 / 0,8 / 1.0 / 1.2mm
Glitter Silicone, Silicone mafy
Carton & boaty kitapo
20 andro aorian'ny fandraisana ny fandoavana ambany
biscuit panendrea lovia
Voninkazo manamboatra lovia mofomamy mahazatra. Ny lovia mofomamy mofomamy rehetra dia amboarina amin'ny akora ara-barotra ara-barotra, vita amin'ny habe sy ny fanamafisana natao hanatrarana ny filanao mofomamy, ary mifangaro amin'ny zavatra tianao hatao.
Ny antsipirian'ny antsipirihany ho an'ny tsofoka: ho an'ny vilia fampandroana mofo
Code Code Description Specifications
MY14222 Muffin Tray tsy hazo-35Cup 600 × 400 × 33 Alusteel 0.6 / 0,8 Silicone Glaze
MY13442 Tombo-kaonty Mini kely-24Cup 600 × 400 × 25 Alusteel 0.6 / 0,8 Silicone Glaze
MY13111 Pudding Tray-24Cup 600 × 400 × 32 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone Glaze
MY13362 Mofom-bavan'ny mofomamy vita amin'ny tànana 600 × 400 × 23 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone Glaze
DZ502 Pie Tray-40Cup 600 × 400 × 27 Alusteel 0.6 / 1.2 Silicone Glaze
MY12302 Mini mofomamy mofomamy kely-21Cup 600 × 400 × 26 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone Glaze
MY12312 Mini mofomamy mofomamy kely-36Cup 600 × 400 × 26 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone Glaze
MY12322 Mini Cake Tray Rabbit-36Cup 600 × 400 × 22 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone Glaze
MY12332 Tray kely mofomamy kely Mini-25Cup 600 × 400 × 35 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone mafy
MY12441 Damba kely mofomamy kely Apple-24Cup 600 × 400 × 40 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone mafy
MY12362 Mini cake Tray Duck-20Cup 600 × 400 × 32 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone mafy
MY14232 Dobalika mofomamy kely (Rectangular) -30Cup 600 × 400 × 20 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone Glaze
MY12022 Muffin Tray-28Cup 600 × 400 × 35 Alusteel 0.6 / 1.2 Silicone Glaze
MY12372 24 kaopy Tray 600 × 400 × 30 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone Glaze
MY14341 Alusteel Tray-24Cup 600 × 400 × 30 Alusteel 0.6 / 1.0 Silicone Glaze
Material: for biscuit panendrea lovia
2. Ny vy aluminium
3. Ny vy vy
Material Thickness: 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, sns.
Fitsaboana atody: tsy misy coating, coating teflon tsy mipetaka, glastika silicone, hoso-doko mafana, sns.
Ny fitaovana samy hafa miaraka amin'ny kalitao sy ny vidiny samy hafa, ny dingana samy hafa miaraka amin'ny saram-fitaovana samy hafa (ny vidin'ny bobongolo / mahatonga ny vidin'ny maty). Ampiasainay ny fitaovana manafatra mba hahafahana mameno ny fepetra ilaina amin'ny kalitao mety haharitra ela.
QC Profile: ho an'ny mofomamy panetsea mofo
Mihevitra izahay fa ny kalitao dia ny fiainan'ny orinasa. Manana ny laboratoara izahay manokana, ary fehezin'ny QC. Nahazo fitaovana fampitaovana ho an'ny fisafoana izahay. Izahay dia hanao fisafoana isaky ny andiany fitaovana vita amin'ny mofomamy, ny hateviny, ny fitarainana, ny fananana Ink adsorption, sns. A Hojerentsika ny fizotran'izay entana isaky ny fizotranay, isaky ny andiany vokatra farany, ny entana rehetra dia tokony ho mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa na ny fenitra iraisam-pirenena. Ankoatr'izay, ny SGS, BV ary ny fitsirihana institiota fahatelo hafa dia ho azo sy ekena. Aza manahy ny momba ny kalitao, ny kalitao no fiainanay. Hankafy ny fahatokisan'ny mpanjifa izahay.
Vokatra hafa mifandraika
1. trondro borur / hamburger horonam-boky
2. lovia alika mafana / tray mihodina mafana
3. Napetraka ny mofo / mofo
4. lasitra mofomamy
5. ny baoritra fihodinana am-basy
7. tady miloko multiforme
8. lovia vita amin'ny tady-silicone
9. lovia (mofomamy) lovia
10. lovia baguette
11. pie pan
12. panina pizza
13. takelaka vita amin'ny aluminium / alusteel takelaka
14. takelaka fanosotra
Zava-misy momba ny fonosana: kitapo hazo & boaty baoritra
Ny antsipiriany momba ny fandefasana: 20 andro aorian'ny fahazoana ny sandam-bola
Izahay dia trano orinasa matihanina amin'ny fanamboarana lovia sy mofo panina. Ny varotra sy ny teknisianina nisy anay dia nitaona hanomezana anao serivisy kintana volamena sy vokatra tsara indrindra. Azonao atao ny mandefa anay ny volavola modrafitra ary koa ny santionany, hataonay ho lasa tena vokatra ilainao izy.
Raisina an-kafaliana amin-kafanam-po hitsidika ny tranobenay sy mampahazo aina ny kalitaonay izahay, ary misy resaka madinadinika.
Wuxi Bakeware Factory dia mpamokatra ary mpamatsy vokatra vita amin'ny mofo tsy miorina, natsangana tamin'ny volana martsa 2003. Miasa 14000 m izahay 2 atrikasa, trano faran'izay tsara, fizotran'ny famokarana mialoha ary ekipa manana R&D tena tsara. Ny orinasa anay amin'izao fotoana izao dia manamboatra karazana takelaka 1000 eo ho eo, manavao tsy tapaka ny famolavolana vokatra ary manamboatra ho an'ny ho avy. Ny vokatra lehibe amin'ny fanamboarana dia misy lalotra fanamboarana, mofo, mofo, mofo, famolavolana mofomamy, troliola, peratra mofomamy, sns. Izahay dia mirehareha amin'ny firenentsika hoe "Flowery", noforonina tamin'ny taon-dasa tamin'ny nananganana ny orinasa anay. Miaraka amin'ny fanaterana kalitao tsara sy ara-potoana tsara indrindra, ny Wuxi Bakeware Factory dia namorona sary iray malaza sy azo itokisana amin'ny fanondranana, izay lasa lafiny fototry ny varotra ataontsika. Ny varotra an-tsena an-trano an-tsokosoko dia efa niantomboka nanerana an'i Shina, ka nitombo haingana ny varotra iraisam-pirenena. Izahay koa dia manaiky ny maha-zava-dehibe ny fahatokisan'ny mpanjifa ary mandrisika ny mpiasa rehetra mba hanompo ny mpanjifa araka izay tratry ny fahaizany. Farany dia mikatsaka ny fahatokisana matihanina amin'ny vokatra sy serivisy tsara rehetra izahay.
1. Manangana maraina ny orinasa ary manana kolontsaina manankarena.
2. Manana traikefa manondrana any export isika.
3. Manana ekipa matanjaka izahay ho an'ny famolavolana vokatra sy fampandrosoana.
4. Manana fitaovana sy famoahana fanafody maoderina avy amin'ny Japoney sy amerikana isika.
5. Ny coating materiale amin'ireo mofo itondranay dia teflon.
Nandray anjara taminà fampirantiana marobe ny orinasanay, toy ny Canton Fair (Guangzhou), Bakery China (Shanghai), IBA (Alemana), GULFOOD MANUFACTURING (Dubai), IBIE (Etazonia), FHA (Singapore), sns.
Mpanjifa atokisan & mpanjifa natoky
Q1: Orinasa ve ianao na orinasa ara-barotra?
A1: Eny, orinasa izahay, WUXI BAKEWARE CO., LTD. Ao amin'ny Distrikan Binhu, Wuxi City, Jiangsu Province, Shina no misy azy io.
Q2: Inona no akora entin'ny vokatrao?
A2: Allie aluminium amin'ny alàlan'ny sakafo, alusteel, stainless vy, sns, aondrana avy any Japon, Eropa, sns.
Q3: Azoko atao ve ny manamboatra ny haben'ny famokarana? Ary firy ny vokatra azoko manokana?
A3: Eny, azonao atao. Azonao atao ny manome ny antsipiriany amin'ny antsipiriany mba hamokatra ny vokatrao. Ary ny vidin'ny FOB atolotra dia natao ho fanondroana fotsiny, ny vidin'ny fanao manokana azafady manontania.
Q4: Azo antoka ve ny mifandray mivantana amin'ny sakafo mivantana?
A4: Azo antoka. Ny vokatra azontsika dia mahafeno ny fenitra FDA, SGS.
Q5: Ahoana no ahafahantsika mahazo santionany?
A5: Nomem-boninahitra ny tranobenay hanomezana santionany ho anao hanamarina ny kalitao. Avelao ny vokatra momba ny vokatrao no hilaza aminao ny marina.
Q6: Ahoana no fomba fifehezana ny orinasa momba ny kalitao?
A6: Ny kalitao no laharam-pahamehana hojerentsika, mandinika tsara ny hatsaran'ny vokatra tsirairay izahay. Ny fizotran'ny vokatra rehetra dia eo ambany fifehezana kalitao henjana. Ary ny vokarintsika rehetra dia nandalo ny fenitra iraisam-pirenena.
WUXI BAKEWARE CO., LTD
Adiresy: Taihu Town, Distrika Binhu, Wuxi City, Jiangsu Province, China
PC: 214121 Tel: + 86-510-85071128
Fax: + 86-510-85071328 QQ: 3271668146
Skype: stella.wang628 Wechat: + 86-150 5229 6593
Whatsapp: + 86-150 5229 6593 Finday: + 86-150 5229 6593
Tranokala: http://www.flowerybakeware.com; www.bake99.com/
Previous: Fivarotana mofomamy amin'ny fivarotana boribory tsy mivadika mofomamy mofomamy lfgb amin'ny vidiny ambany
Manaraka: Mofomamy mofomamy 24 mofomamy mofomamy mofomamy amin'ny mofomamy amina CE
Mofomamy mofomamy vita amin'ny mofomamy vita amin'ny mofo tsy misy fangarony ...
Ny lao-trondro mofomamy / lafaoro mofomamy miaraka amin'ny ...
Famolavolana vaovaom-panamboana 12 mofom-bary / mason-trondro vita amin'ny ...
Fandroana mofo amin'ny matihanina miaraka amin'ny fanamarinan'ny CE ...
Famoronana lafaoro vaovao 1.5l oval milamina tsy misy azo antoka miaraka amin'ny ...
Fanolorana mofomamy matihanina sy fanendasana mofomamy ...
Adiresy: Village Liangnan, Taihu Town, Distrika Binhu, Wuxi, Jiangsu, Sina